နေ့စဥ် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် Switzerland ဘုရားကျောင်း
၎င်းကိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့်ဓမ္မပညာရှင်များအကြားစိတ် - ခန္ဓာကိုယ်၏ပြproblemနာ (ခန္ဓာကိုယ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာ) ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်မော်တာညှိနှိုင်းမှုပြaနာမဟုတ်ပါ (ခွက်တစ်ခုမှသောက်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုမဖိတ်ခြင်း၊ လှဲချပစ်ခြင်းမပြုဘဲ) ၎င်းအစားမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလား။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်လူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်သာလော၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်၏ပြproblemနာကိုတိုက်ရိုက်မဖြေရှင်းသော်လည်း၊ ၎င်းသည်လူ့ဖြစ်တည်မှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောဘက်နှင့်ရှင်းလင်းသောကိုးကားချက်များပါဝင်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဦးခေါင်း၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး သားတော်အားဖြင့် ခမည်းတော်ထံမှ ထာဝရထွက်သွားသည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးထံ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်က ကတိပြုထားသော နှစ်သိမ့်ပေးသူဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌နေထိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခမည်းတော်နှင့်သားတော်နှင့် ပေါင်းစည်းကာ၊ နောင်တရခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောင်းလဲပေးကာ စဉ်ဆက်မပြတ် အသစ်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာရှိ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပရောဖက်ပြုချက်များ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး အသင်းတော်တွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် မိတ်သဟာယ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဧဝံဂေလိအလုပ်အတွက် ဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင်များကို ပေးဆောင်ပြီး အမှန်တရားအားလုံးအတွက် ခရစ်ယာန်၏ အဆက်မပြတ်လမ်းညွှန်သူဖြစ်သည်။ (ယော ၁4,16; 15,26; Apostelgeschichte…
"မင်းကိုငါမခိုင်းချင်ဘူး၊ မင်းကိုမစွန့်ခွာချင်ဘူး" လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့လို့ပါပဲ (ဟေဗြဲ ၁၃၊ ၅) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးတည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းရွက်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်ပေးသည်။ မုသာမပြောနိုင်သော ဘုရားသခင်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ကတိပေးသောအခါ၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ဖြစ်နေပြီဟု ထင်သည်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တွေအကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပြောသလဲ။ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သတင်းပို့သည်။ 1. Korinther 10, 13 „Es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche; Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.“
ဒါကို ထောက်ခံပြီး ထပ်လောင်းရှင်းပြပါတယ်။ 5. Mose 31,6und 8: „Seid fest und unentwegt, fürchtet euch nicht und lasset euch nicht vor ihnen grauen! Denn der Herr, dein…
အသင်းတော်သည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီးသူသည်ပြည့်စုံမှုအပြည့်ဖြင့်နေထိုင်သည်။ အရာအားလုံးနှင့်အရာအားလုံးကိုသူ၏တည်ရှိမှုနှင့်ပြည့်စေသောသူ (ဧဖက် ၁း၂၃) ။
Aber leider vergessen wir dies als Menschen allzu oft. In der Fernsehsendung „Wer meinst du, wer du bist?“ haben die Teilnehmern die Möglichkeit mit Ihren Vorfahren bekannt zu werden, sie kennen zu lernen, ihren Lebensstil und sehr wichtig, sogar Fotos von Ihnen zu sehen. Ich selbst habe Fotos von meiner Ehefrau, Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter aber diese Fotos offenbaren meinem Sohn seine Mutter, Grossmutter, seine Urgrossmutter und seine Ur-Urgrssmutter! Und natürlich bedeutet es für seinen Sohn, einen Blick auf seine Grossmutter, Urgrossmutter, seine Ur-Urgrossmutter und seine Ur-Ur-Urgrossmutter zu erhaschen! Dies erinnert mich an einen Abschnitt der…